NAIROBI, Kenya - Dembi oogaha dalka Kenya, Nuuradiin Xaaji ayaa soo saarey war qoraal ah, oo kusoo bandhigay liiska magacyada shan qof oo ku lug yeeshay weerarkii Dusit D2 hotel, ee Nairobi, kuwaasoo Jimcihii, lasoo taagay Maxkamad.
Booliska Kenya ayaa xiray shan qof oo uu ku jiro muwaadin u dhashay Canada, iyagoo markii ugu horeysay kasoo muuqdey Maxkamadda Milimani, oo xukuntay in xabsi lagu hayo 30 maalin, illaa kasoo dhamaanayo baaritaanka iyo su'aallo waydiinta.
Raggan ayaa lagu eedeeyay inay gacan siiyeen kuwii weerarka ku qaadey Hotel-ka, waxaana magacyadooda lagu kala dheegay:
Joel Ng’ang’a Wainaina, waa tagsiile [Taxi driver], wuxuu meel kala duwan gaarigiisa ku geeyay mid kamid ah dableyda.
2.Oliver Kanyago Muthee, waa tagsiile kale, oo isna la tuhmayo
3.Gladys Kaari Justus, wuxuu ka shaqeeya Xawaalad, waxa uu lacag u diray qof la shaqeynayay raggii weerarka fuliyay.
4.Abdihakim Mohamed Guled, waa muwaadin u dhashay Canada, waxaa lagu qabtey Nairobi 17-ka bishan.
5.Osman Ibrahim, waxaa loo haystaa inuu la kulmay mid kamid ah kooxdii weerarka geysatay 8-dii bishan.
Dhanka kale, Dembi oogaha ayaa shaaciyay magaca ninkii isku dhex qarxiyay Dusit D2 hotel, oo uu ku sheegay Maahir Khaalid, oo kasoo jeeda gobolka Xeebta ee dalka Kenya.
Maahir ayaa mudo katirsanaa garabka Al-Shabaab uga dagaalama Kenya, oo lagu magacaabo Jaysh Ayman, oo inta badan ka howlgala Keymaha Boni iyo degaanada xuduuda ku yaalla, waxaana hogaamiya nin u dhashay Kenya.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka Dusit D2 hotel, kaasoo lagu dilay 21 qof, oo labo kamid ah Soomaali ahaayeen, halka in ka badan 100 lagu dhaawacay.
Xaaska iyo aabaha ninkii isku qarxiyay hotel-ka Dusit ee Nairobi oo la xiray
Afrika 19.01.2019. 17:33
Ciidamada ayaa sameeyay baadi goob iyagoo qabtey dhowr qof oo weerarka ku lug lahaa.
Al-Shabaab oo Magac u bixisay weerarkii Nairobi iyo Kooxda fulisay
Soomaliya 17.01.2019. 15:47
Dhaqaatiir ka farxiyay Nin xubintiisa taranka laga jaray [Akhri qormo xiiso leh]
Afrika 30.01.2019. 12:30
Tiradda ragga weeraray Hotel-ka Nairobi oo la shaaciyay iyo Kenya oo ka hadashay
Afrika 15.01.2019. 18:36